Khamiis, Maarso 26, 2009 Khamiista, Oktoobar 23, 2014 Douglas Karr
Kani waa qoraal gaaban oo macaan oo ku saabsan arrimaha xajinta. Goobaha iyo biraawsarayaasha waxaa loo dhisay si run ahaantii loo hagaajiyo ilaha. Waxay si fiican u sameeyaan mararka qaarkood natiijada ugu dambeysa dhab ahaantii waxay jabisaa boggaaga firfircoon halkii aad ka cusbooneysiin lahayd sida ugu badan ee aad jeceshahay. Maanta waan la shaqaynayay Ciyaartoyda JW, Flash Movie player oo jiidaya liiska filimada iyada oo loo marayo faylka XML.
Dhibaatadu waxay tahay inaan had iyo jeer ku cusbooneysiinno feylka webinarro cusub iyo fasalo tababar. Haddii macaamiisheennu ay sii wadaan inay yimaadaan bogga maalin kasta, waxay soo rogi doontaa nooc ka mid ah keydka liiska oo waligood dhab ahaantii ma tusin kii ugu dambeeyay iyo kan ugu weyn.
Natiijo ahaan, waa inaan jabsaday Koodhka SWF si ay ugu maleyneyso inay rarayaan liis cusub oo ciyaaro ah markasta.
Kani maahan mid anfacaya JW Player, waxaan sidoo kale farsamadan u adeegsaday Khariidadaha Google markii aan la macaamilayo faylasha KML ee isbeddelaya. Si fudud u soo saar querystring aan kala sooc lahayn oo nidaamku dib ayuu u buuxin doonaa faylka KML (si caadi ah oo joogto ah) mar kasta oo isticmaaleyaashu booqdaan. Waa khayaano, laakiin waa hab fudud oo asal ahaan loo rogo kaydinta off barnaamijyadan aan ikhtiyaarka u lahayn.
Soo kabashada Musiibada Virtual Lagu sharaxay Legos